I-imeyli yogaxekile yakha ingxenye enkulu yama-imeyili afinyelela kumakhompyutha abantu. Iningi lama-imeyili abantu abatholayo livela kugaxekile. Ezimweni eziningi, lawa ma-imeyili avela kubhobho namabhodlela. Ukulwa nokuhlaselwa kwe-botnet akuwona umsebenzi olula. Isibonelo, umuntu kufanele akhumbule ngenani lebhobhu, imiyalezo ethunyelwe kanye nama-byte athunyelwe yi-botnet.